Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan-tsarimihetsika nataon'i John Thompson Ford Jerry Seinfeld - Fikarohana momba ny vatana teraka
Rehefa nalefan'i Ishtar ilay sosokevitra izany Jerry Seinfeld dia ny vatana vaovao indray John Thompson Ford, Dia nanamarika tarehimarika ara-batana aho, izay mety ho voamarikao kokoa raha toa ka misy sarin'i Jerry ao amin'ny vodilaharana iray ihany no entin'i John Ford. Rehefa namaky momba an'i Ford aho, dia nahavariana ahy kokoa ny nahafantatra fa nanoratra kilalao, sarimihetsika, manan-kery izy Richmond Tahaka Izany, izay mifantoka amin'ny lafiny mahatsikaiky amin'ny fiainana andavanandro. Izany dia antsoina hoe fampisehoana comedy, izay tena karazana hatsikana izay nampiasan'i Jerry Seinfeld ho iray amin'ny karazana fampihetseham-baovao tsara indrindra amin'ny vanim-potoana misy antsika.
Ity tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao ity dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny fanahy manorina amin'ny zava-bita hatramin'ny androm-piainany iray hafa. Ford dia nanana fanomezana ho an'ny vazivazy, saingy niasa tamin'ny asa isan-karazany mba hivelomana. Amin'ny vanim-potoana ankehitriny, namelana ny fanomezana an'i Jerry Seinfeld ho an'ny hatsikana fandinihana. Tranga iray hafa no omena etsy ambany izay mampiseho amin'ny fomba mahery vaika ny fananganana tsy fahatsiarovan-tena amin'ny zava-bita tamin'ny androm-piainana taloha:
Ny mahaliana dia i John Thompson Ford no mpitantana ny Teatra an'i Ford tany Washington, DC tamin'ny fotoana namonoana an'i Abraham Lincoln. Ford dia naman'i John Wilkes Booth, mpamono olona an'i Lincoln, satria i Booth dia mpilalao malaza nanatontosa tao amin'ny Theatre an'ny Ford im-betsaka.
Mpandray anjara maromaro izay nahalala an'i John Wilkes Booth no niorina indray tamin'ny vanim-potoana ankehitriny. Anisan'izany mpilalao izany i Tom Cruise. Azafady avereno jerena:
Ny kaonty antsipiriany momba ity vondrona fanahy ity dia aseho ao amin'ny bokiko: ateraka indray
Fitoviana ara-batana: Ny endrika mampiavaka an'i John Thompson Ford sy Jerry Seinfeld dia mitovy. Ny tsy fitovizany dia ny pose Ford manana sary matotra ao amin'ny sariny, raha i Jerry Seinfeld kosa dia tratry ny endrika maivana kokoa. Raha i Jerry Seinfeld dia nitovy tamin'ny fomba nitovizany tamin'i Ford, dia hiharihary kokoa ny fitoviana.
Ny fiainana taloha talenta: Nanao fampihomehezana i Ford, izay mifantoka amin'ny lafy ratsin'ny fiainana andavanandro, izay tena karazana hatsikana Jerry Seinfeld dia fantatra.
Jerry Seinfeld sary avy amin'i Alan Light, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1225845